Emperor Cruises azon'ny Lux Group monina any Hanoi
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Vietnam » Emperor Cruises azon'ny Lux Group monina any Hanoi
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • fampiasam-bola • Vaovao • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
ligy 3 5
Ny Lux Group monina any Hanoi dia nahazo tanteraka ny kintana dimy, eken'ny rehetra Emperor Cruises, manampy ny portfolio an'ny orinasan-dia sy fandraisam-bahiny izay ahitana ny DMC Luxury Travel and Heritage Cruises. Tao anaty fanambarana iray, ny filohan'ny Lux Group, Pham Ha dia nilaza fa ny orinasa "dia hanitatra ny portfolio -n'ny sambo kely sy ny fitsangantsanganana an-tsambo mankany amin'ny toerana vaovao fitetezana" taorian'ny fisamborana.
Mandritra izany fotoana izany dia manana GM vaovao ilay orinasa. "Nandritra ny 16 taona mahery tamin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo, ny finoako ny fikatsahana fahombiazana dia azo ampitahaina amin'ny fisamborana rivotra rehefa miondrana an-tsambo izahay, mba handrosoana haingana amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka mba hahafahantsika mankafy ilay dia fa tsy hadinontsika mihitsy ny tanjona. Ho ahy, ny dia dia zava-dehibe kokoa noho ny toerana haleha. Ny antony manosika ahy tsy tapaka dia ny hanao bebe kokoa ary hiasa akaiky kokoa amin'ny ekipako ary hizara ny fitiavantsika ny fahombiazana mitohy. ” Said Nguyen Ngoc Quang, ny GM vaovao an'ny Emperor Cruises.
Emperor Cruises dia manana andian-tsambo roa miasa ao amin'ny Bay Nha Trang sy Bai Tu Long, ny bay sy morontsiraka tsara indrindra any Vietnam. Emperor Cruises Nha Trang dia manolotra seza 40 ho an'ny charty manokana sy manokana ho an'ny fitsangatsanganana an-tsambo antoandro sy ny fitsangantsanganana fisakafoanana cocktail filentehan'ny masoandro. Ny orinasa dia manome serivisy sambo hafainganam-pandeha ho an'ny traikefa nahafinaritra indrindra tao amin'ny Helodrano Nha Trang sy ireo faritra manodidina.
Ny sambo lafo vidy dia miondrana an-tsambo mankany amin'ny fahagagana voajanahary Bai Bay Long Bay, faritra iray feno angano. Eny an-tsambo, mpandeha 16 fotsiny ao anaty tranony feno miisa 8 no mankafy lavarangana manokana, fahitana ny ranomasina avy amin'ny toerana rehetra, ary ny serivisy fitaterana manokana. Ny sambo Emperor Cruises dia natao ho fitoerana masina hahazoana antoka fa isa-maraina isaina ho an'ny vahiny ny Halong Bay, izay tsy maintsy jerena ao amin'ny lisitry ny mpandeha rehetra mankany Vietnam. Izany no mahatonga ny Emperor Cruises ho mpandraharaha fitsangantsanganana an-dranomasina nahazo loka.
Ny sambo fitsangatsanganana voalohany misy kintana dimy voalohany an'i Vietnam, Emperor Cruises dia voafidy ho an'ny voninahitra malaza indrindra amin'ny Awards Awards isan-taona 2019 ho an'ny fampisehoana tsara mandritra ny efa-taona misesy. Ny Guide Awards dia hetsika fanao isan-taona karakarain'ny Vietnam Economic Times mba hankalazana ireo vokatra sy serivisy tsara indrindra amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisana vahiny ao Vietnam. Ity taona ity dia manamarika ny faha-20 taonany ary ny lanonana mari-pankasitrahana, manomezam-boninahitra zava-bita tsara indrindra teo amin'ny sehatry ny fizahantany tamin'ny taona 2018/19, dia hotontosaina amin'ny 26 septambra 2018 ao amin'ny Flamingo Dai Lai Resort.
Ireo nahazo loka dia natolotry ny mpamaky ny maodely lamaody sy ny haitraitra tamin'ny voalohany, miaraka amin'ny lisitra fohy natolotra ny birao mpanatanteraka ny Guide, famoahana ny Vietnam Economic Times, miorina amin'ny mason-tsivana toy ny kalitaon'ny fotodrafitrasa sy serivisy, ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana ary fandraisana anjara amin'ny sehatra. Ny manam-pahaizana momba ny dia, hotely, trano fisakafoanana ary fiantsenana dia asaina hanampy ny birao amin'ny fanapahan-keviny.
"Amin'ny maha-fitsangantsanganana an-tampon'ny kintana dimy voalohany voalohany an'i Vietnam anay, dia faly erỳ izahay sy ny ekipa iray handray io loka indostrialy fizahan-tany malaza io noho ny laharam-pizanan-tsambo fizahan-tany malaza any Vietnam, izay hampirisika ny ekipantsika hanana fahamboniana bebe kokoa," hoy i Quang .
“Ny fitsangantsanganana dia momba ny toerana, traikefa ary fahatsiarovana ary manolo-tena tanteraka izahay hanome ny traikefa tena izy sy tsy manam-paharoa ho an'ireo vahininay. Hanangana sambo fitsangantsanganana iray hafa izahay any Nha Trang sy ny nosy Phu Quoc, miaraka amina seza 100 ho an'ny fitsangantsanganana antoandro, ary koa handefa sambo Emperor Cruises mandritra ny alina ao amin'ny Cat Ba Archipelago, miaraka amina cabins en suite en 32. Izany dia hahatonga ny sambon-tsinay ho dimy amin'ny totalin'ny mpiasa 500 eo ho eo isan'andro. ” Hoy i Pham Ha.
Manomboka amin'ny 2020, ny sambo Emperor Cruises 48-vahiny dia sambo mpitsangatsangana amoron-tsambo sy namboarina amoron-dranomasina miaraka amina fitsangatsanganana hafahafa 1-3 alina manodidina ny Cat Ba Archipelago ao amin'ny Hoalan'i Tonkin. Ny fampiasa aminy dia misy spa, dobo an-kalamanjana, ary suite 24 miaraka amina varavarankely lehibe manome fahitana ranomasina tsy manam-paharoa, ny sambonay dimy-kintana faharoa, miompana amin'ny serivisy miaraka amin'ny serivisy butny sy ny famindrana limousine.
Ny traikefa an-tsambo vaovao dia mety indrindra ho an'ireo mpandeha miverina mankamin'ny Cat Ba Archipelago, ireo izay mitady zavatra hafa, hafahafa ary ivelan'ny mahazatra. Ireto traikefa an-dranomasina miavaka indrindra ireto dia tena atolotra ho an'ny mpandeha fialam-boly efa za-draharaha, mpitsangatsangana an-tsokosoko, volan-tantely, fianakaviana, mpitsangatsangana manokana, tia zavakanto, mpizaha tany, mpaka sary, vondrona namana, VIP ary olo-malaza. "